पाल्पा क्याम्पस : अधिकांश विद्यार्थी बुहारी र आमा ! - नेपालबहस
पाल्पा क्याम्पस : अधिकांश विद्यार्थी बुहारी र आमा !
| १७:४६:२० मा प्रकाशित
◊ सुशीला रेग्मी
३१ भदौ, रामपुर । पूर्वी पाल्पाको पहिलो क्याम्पस शहीद बहुमुखी क्याम्पसले ‘बुहारी–आमा’ क्याम्पसको पहिचान बनाएको छ । विद्यालयको पढाइ सकेका अधिकांश छोरी–बुहारी तथा आमा यसै क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने भएका कारण यसले ‘बुहारी–आमा’ क्याम्पसका रूपमा आफ्नो चिनारी बनाएको हो । यहाँ भर्ना भएका कूल विद्यार्थी सङ्ख्यामध्ये ८१ प्रतिशत विद्यार्थी छात्रा नै छन् । तीमध्ये पनि अधिकांश बुहारी तथा आमा बनिसकेका छन् ।
स्नातकोत्तर तहसम्मका कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको यस क्याम्पसका अधिकांश विद्यार्थी छोरी, बुहारी र आमाहरु छन् भने स्नातकोत्तर तहमा पढ्ने विद्यार्थीमा त धेरैजसो बुहारी र आमा नै भेटिन्छन् । विसं २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् गण्डकबेँसीका नागरिकलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न यहाँका स्थानीयवासीको जोडबलमा चन्दा उठाएर क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । साविक रामपुर गाउँ विकास समितिको मातहतमा रहेको ५० रोपनी सार्वजनिक जग्गामा क्याम्पस सञ्चालन गरिएको हो ।
घरायसी कामधन्दा, बालबच्चाको स्याहारसुसार गरेर केही समय क्याम्पसको पढाइमा दिएर शैक्षिकस्तर उकास्न यहाँका बुहारी तथा आमा कस्सिएका छन् । रामपुर नगरपालिका वडा नं ७ बस्ने गीता पौडेलले दुई सन्तानको रेखदेखसँगै गाउँमा नै स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाइ सके । गाउँमै स्नातकोत्तर तहसम्मको पठनपाठन भएपछि आफूले स्नातकोत्तर तह पढ्ने इच्छा पूरा गर्न पाउँदा उनी खुशी छिन ।
‘‘बिहे भए पनि घरमा सबै परिवार शिक्षित नै थिए, छोरी–बुहारीलाई पनि राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने परिवार थियो तर आमा बनिसकेपछि थप जिम्मेवारी बढ्यो, छोरी बुहारी हुँदै आमा बनियो, आफैँलाई बाहिर बसेर पढ्न अप्ठ्यारो प¥यो, घर नजिकै क्याम्पस थियो त्यसैकारण पढ्ने इच्छा पूरा भयो’’ उनले भनिन।
उनी अहिले सामाजिक क्षेत्र र जागिरमा आवद्ध छिन । गाउँमा बिहे भएर आएका आफूजस्तै अन्यत्र बुहारीहरुलाई पनि पठनपाठन गर्न एक प्रेरणाका स्रोत बनेकी छिन । पौडेलले काखे छोरा घरपरिवारको साथमा छोडेर बिहानमा स्नातक तहको कक्षा लिने गर्थिन । आमा बनिसक्दा पनि स्नातक तह पढ्ने चाहना पुरान गरेकी पौडेल पुनः दोस्रो सन्तानका रुपमा छोरी जन्मिसकेपछि पनि स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भएर अध्ययन पूरा गरिन ।
रामपुर नगरपालिका–४ खोप्टार बस्ने देवी रिमालले घरमा बच्चाको रेखदेख गर्ने मान्छे नभएको समय आफैले क्याम्पसमा साथमै लिएर कक्षा लिन जाने गर्छु । उनी भन्छिन, “गाउँमै क्याम्पस सञ्चालन भएपछि परिवारका सदस्य कहिलेकाहीँ अन्यत्र गएका समयमा पनि बालबच्चालाई लिएर भए पनि कक्षा लिन पाइएको छ, सबैभन्दा ठूलो कुरा हामी बुहारी आमाहरुलाई पढ्ने वातावरण मिलेको छ, हामी शिक्षित भयौँ भने छोराछोरीको भविष्य राम्रो बन्नेछ भन्ने लाग्दछ ।”
उहाँले कक्षामा आफू साथमा नै छोरालाई राखेर पढिरहेको देख्दा प्रध्यापकहरुमा पनि खुशीयाली छाएको छ । बालबच्चा र घरायसी कामलगायत विविध समस्याले बाहिर गएर पढ्ने चाहना राखेपनि झट्ट पढ्न जाने वातावरण सहज नहुँदा बुहारी तथा आमालाई समस्या पर्ने गरेको छ ।
घरबाटै बुहारी क्याम्पस पढ्न गएको देख्दा सासु–ससुरा तथा परिवारका सदस्य निकै खुशी छन् । हिजोका दिन छोरी–बुहारीलाई शिक्षा दिन पछि हट्ने समुदाय तथा परिवार अहिले भने समय मिलाएर पढ्नुपर्छ भन्ने धेरैमा परिवर्तन आएको पाइएको छ । बुहारी बिहान उठेर क्याम्पस पढ्न गएको देख्दा पनि रमाइलो लाग्ने गरेको कुलप्रसाद गौतम बताउछन । छोराले बरु धेरै पढेनन् तर बुहारीले स्नातकोत्तर तह पढ्न थालेपछि परिवारमा खुशीयाली छाएको छ भन्छन ।
कुनै समय छोरी बुहारीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ नराख्ने हाम्रो समाजमा अहिले छोरी–बुहारी तथा आमा विद्यार्थी नियमित कक्षामा सहभागी भएर पढिरहेको देख्दा राम्रो लागेको क्याम्पस प्रमुख मुरारीप्रसाद काफ्ले बताउछन । “पढ्ने चाहना भएकाले घरायसी काम गरेर भए पनि इच्छा पूरा गरिरहेका छन् भने पछिल्लो समय स्नातकोत्तर तह पढ्ने समाजमा कमै भेटिन्थे भने अहिले धेरै रहेका छन् र त्यसमा पनि हामीकहाँ स्नातकोत्तर तहमा बुहारी तथा आमा समूहको बर्चस्व छ”, उनले भने ।
पूर्वी पाल्पामा क्याम्पस नहुँदा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेपछि गण्डकीबेँसीका नागरिकलाई पाल्पा सदरमुकाम तानसेन, बुटवल, पोखरा, नारायणगढ, काठमाडौ+ लगायतका शहरमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका परिवारले मात्रै अन्यत्र गएर पढ्ने गरेपनि धेरैजसोले बीचमै पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता थियो । क्याम्पस तहको पठनपाठन रामपुरमा नै सञ्चालन गर्न समुदाय नै लागि परेपछि स्वीकृत भई क्याम्पस सञ्चालन गर्न सफल भएको क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा संस्थापक देवराज ढकाल बताउनुहुन्छ । विसं २०४६ को जनआन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएका रामपुरका शहीद सूर्यप्रसाद घिमिरेको नामबाट क्याम्पस सञ्चालन गरिएको हो ।
बुहारी आमा बनिसकेपछि पायक पर्ने ठाउँमा क्याम्पस नहुदा पढ्ज जान अप्ठ्यारो पर्ने प्राध्यापक तथा पूर्वविद्यार्थी रेखा काफ्ले बताउछीन । उनले पनि बुहारी आमा बनेपछि मात्र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गरेकी छिन ।
“परिवार पढेलेखेको थियो, श्रीमान् आफैँ शिक्षण पेशामा आवद्ध हुँदा सबैले पढ्नुपर्छ भने, काखको बच्चा छाडेर बाहिर गएर पढ्न जान म आफैलाई समस्या थियो, कोठा नजिकै क्याम्पस हुँदा जसोतसो दुःखसुखसँग स्नातक तहको पढाइ यहीँ पढ्ने इच्छा पूरा गर्न पाएँ, दुःख गरेर पढाइ सकाएँ, पहिले यस क्याम्पसमा म आमा–बुहारी विद्यार्थी थिएँ भने अहिले प्राध्यापन गरिरहेको छु”, उनले भनिन ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा प्रत्यायन ‘क्युएए’ विगत चार वर्षदेखि चलिरहेको छ । आयोगमा क्युएएको ड्राफ्ट पनि बुझाइसकिएको छ । क्युएए प्रमाणीकरण गर्न खोजेको, समयअनुसार गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षा, विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने क्याम्पसको लक्ष्य रहेको सञ्चालक समितिका सदस्य दिवाकर देवकोटा बताउछन । रासस
भोलिदेखि मिर्चैयामा विद्यालय सञ्चालन हुने १ दिन पहिले
अभिलेखीकरणका लागि घरदैलोमा शिक्षक ३ दिन पहिले
बजेट रकमान्तर गरेर वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी बनाइने छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल ३ दिन पहिले
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय : ‘घरघरमा परीक्षा’ १ हप्ता पहिले
कक्षा १२ : चालीस नम्बरका लागि अनलाइन परीक्षा हुने २ हप्ता पहिले
अनलाइन कक्षाको नाममा चर्को शुल्क असुल्नेलाई कारवाहीको माग २ हप्ता पहिले
विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा डुङ्गामा सरर … १५ मिनेट पहिले
टस हारेर व्याटिङ थालेको पञ्जाबको शानदार शुरुवात १९ मिनेट पहिले
भत्केको सिंचाई नहर पुर्ननिर्माणमा जुटे चापाकोट नगरका प्रमुख गिरि २१ मिनेट पहिले
पर्यटकको पर्खाइमा सौराहाका हात्ती २७ मिनेट पहिले
आईपीएल २०२० मा सर्वाधिक छक्का हान्ने १० व्याट्सम्यान, धोनी र कोहली आउट ! ३७ मिनेट पहिले
राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश ५६ मिनेट पहिले